फ्रेवुअरी 17, 2019 फ्रेवुअरी 17, 2019 साइन्स इन्फोटेक	3 Comments उपयोगिता, डा. अरुणा उप्रेती, बेसन
बेसन चनाबाट बनेको हुनाले प्रोटिनले भरिपूर्ण हुन्छ । बालबालिकालाई खाजामा बेसनका साथै चामल, कोदो, फापर आदिको पिठो मिलाएर रोटी बनाउने हो भने स्वस्थकर र स्वादिष्ट हुन्छ । अन्डासंँग विभिन्न थरीका पिठो र बेसन मिसाएर अमलेट बनाउन सकिन्छ । विभिन्न धार्मिक र सामाजिक उत्सवमा गुलियो खाने चलन छ ।
बेसनको लड्डु बनाउँदा काजु, बदाम आदि हालेर, गुलियोका लागि चिनीको सट्टा गुँड वा सख्खर राख्ने हो भने कति स्वस्थकर, स्वादिष्ट हुन्थ्यो होला ? बालबालिकालाई बेसनले बनाएका परिकार दिन सकियो भने फाइदा हुन्छ । यसको सेवनले कुपोषणले बिरामी भएपछि हुने स्वास्थ्य समस्या रोक्न सकिन्छ ।
झमझम पानी परेका बेला बेसन र प्याजको पकौडा र चिया खाँदा मज्जा हुन्छ । मेरी हजुरआमा चना उमारी पिसेपछि त्यसलाई पानीमा घोलेर फाँडो बनाउनुहुन्थ्यो । बेसनको पिठो अमिलो महीमा घोलेर पकाउँदा पनि मिठो फाँडो वा कढी बन्छ । यो बनाउन सजिलो छ । कढीमा बेसनकै केही पकौडा हालिदियो भने झनै मिठो हुन्छ ।
जामुन र यसको उपयोगिता
उसिनेको आलुमा राम्ररी भुटेको बेसन एक-दुई चम्चा र केही घिउ हालिदियो भने शिशुलाई प्रोटिन पुग्छ । स्वादिष्ट पनि हुन्छ । बालबालिकाका लागि खानेकुरा गुलियो हुनुपर्छ, अमिलो पनि हुनुपर्छ, ताकि विस्तारै बालबालिकाले विभिन्न स्वाद लिन सकुन् । बेसनको बुँदियालाई केही मसला र नुन मिसाएको दहीमा हालिदियो भने रायता बन्छ । त्यही बुँदियामा अलिकता चासनी वा सख्खर मिसाइयो भने मिठो, गुलियो, स्वादिलो पौष्टिकताले भरिपूर्ण परिकार बन्न सक्छ ।
सुजी र बेसनको हलुवा बनाउँदा भिन्नै परिकार बन्छ । त्यही बेसनमा अलिकता आलु मसिनो गरी काटेर केही हरियो तरकारी पनि हालेर पकाइयो भने नुनिलो परिकार बन्छ । त्यसमा केही पिसेको जिरा, धनिया हालेपछि स्वादिष्ट खाजा तयार हुन्छ ।
← आइटी. पार्क र यसको अवस्था अन्योल
गाईको दुध र यसको उपयोगिता →
मार्च 10, 2019 मार्च 10, 2019 साइन्स इन्फोटेक 4
अप्रील 2, 2019 अप्रील 2, 2019 साइन्स इन्फोटेक 4
3 thoughts on “बेसन र यसको उपयोगिता”
Pingback:ब्रोकाउली र यसको उपयोगिता